Ogaden News Agency (ONA) – Taliyaha Amniga Ee Gobolka Axmaarada oo Khalkhalay + Sababta.
Taliyaha Amniga Ee Gobolka Axmaarada oo Khalkhalay + Sababta.
Wararka ka imanaya Gobolka Axmaarada ee Woqooyiga Itoobiya ayaa sheegay khal khal lasoo darsay taliyiha ciidaamada amaanka ee ee Gobolka Axmaarada oo lagu magacaabo Fisaha Wolde Senbet.
Ninkan oo udhashay qoomiyada Tigreega ayaa eedayn dusha usaaray qaar kamid ah saraakiisha lashaqaysa ee udhalatay qoomiyada Axmaarada, wuxuuna sheegay in looqorsheeyay dil lagu fuliyo, kaas oo sida uusheegay uu dhowr jeer ka badbaaday.
Fisaha Wolde Senbet ayaa sheegay in xisbiga ANDM ee bahwadaagta la ah kooxda TPLF ay siwayn ugu mashquulsan yihiin dilkiisa, wuxuuna ANDM ku eedeeyay in ay doonayaan in jagada uuhayo loomagacaabo nin kale oo katirsan xisbiga ANDM.
Qaar kamid ah saraakiisha xisbiga ANDM ayaa dhankooda ku andacooday in dadka udhashay qoomiyada Axmaarada laga ilaaliyay jagooyinka muhiimka ah kuwaas oo sida ay sheegeen loomagacaabo dad aan deegaanka udhalanin oo shacabka dhibaateeya.
Dhinaca kale saraakiisha Axmaarada ah ee lashaqeeya taliyaha amniga ayaa sheegay in taliyuhu uu naas nuujin wayn siinayo dadka udhashay qoomiyada Tigreega, kuwaas oo sida ay sheegeen uu siiyo hantida Gobolka Axmaarada.
Saraakiisha ayaa sheegay in taliye Fisaha wolde uu xabsiga kasiidaayay haweenay udhalatay qoomiyada Tigreega oo lunsatay 47000 oo bir oo iyadoo jeebka usidata lagu qabtay, wuxuuna taliyuhu sibadheedh ah usiidaayay haweenaydan oolagu magacaabo Salam Berihun.
Iskusoo wada duub oo waxaa meel xun gaadhay kala shakigii iyo isminjo xaabintii saraakiisha ciidamada wayaanaha ugu sareeya waxaana maalinba maalinta kadambaysa kasii daraya xaalada wadanka.